Amayunithi Ukuthengisa Nokuqasha e-United States
Iyunithi liyindlela yezindlu ezilingana nezindawo zokuhlala zekhaya elilodwa. Enkulumweni ejwayelekile e-Australia naseNew Zealand, igama elithi "iyunithi", uma libhekisele ezindlini, imvamisa lisho ifulethi, lapho iqembu lezindlu liqukiwe esakhiweni esisodwa noma ngaphezulu esinezimpawu eziningi ('i-floor block'), noma iyunithi le-villa noma iyunithi yasekhaya, lapho iqembu lezindlu likhona esakhiweni esisodwa noma esithe xaxa, ngokuvamile lihlelwe eduze komgwaqo. Ngemuva kwalokho, iyunithi liyisiteyithimenti esiqukethe okuqukethwe amakamelo, ngokuvamile asesilinganisweni esilinganiselwe, esinganamathiselwa, sitshelwe noma sikhishwe, phakathi kweqembu lezindlu ezifanayo. Kusetshenziswe embonini yokuhlela nentuthuko yasemadolobheni yase-Australia naseNew Zealand, futhi kuyisijobelelo sokuhlala. Iyunithi lekamelo elilodwa livame ukubizwa ngokuthi yi-studio flat noma i-beditter, eyaziwa ngokuthi yi-Single Igumbi Umsebenzi noma i-SRO eNyakatho Melika. Kungaba nzima ukubona kahle ukuthi yiziphi izimfanelo ezihlukanisa ezinye zezentuthuko yokuhlala njengamayunithi kulawo abizwa ngokuthi amafulethi noma amafulethi, kepha ukusetshenziswa kwansuku zonke kubonisa ukuthi kunobukhulu besigaba kuleli gama. ECanada, inhlangano kazwelonke yezibalo, iStatistics Canada, ibala inani lezindlu ezizimele ezweni kulelozwe ngalinye, lapho icala laziwa khona ngokuthi "izindlu zokuhlala" futhi lingabhekisela ngokulinganayo endlini noma efulethini. Kuyi-Canadian English "yunithi" yesiNgisi esetshenziswa igama lesambulela ezindlini nasemakhondomu.